Yusuf Garaad: Buur Hakaba - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Afar iyo Tobnaad
Buur Hakaba - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Afar iyo Tobnaad
Beatrix, Cornelia oo iyada shaqada ka beddeli doonta maalmo gudahood iyo aniga ayaa subax ka dhaqaaqnay Muqdisho. Waxaan sii marnay Afgooye, Wanla Weyn.
Waxaa kale oo aan sii marnay Leego iyo Yaaq-Beri-Weyne oo ah degaan aad u qurux badan oo beryahaas ay dad awood u lihi ay isaga daydeen in guri labaad oo Kahmiista iyo Jimcaha la tago ay ka sameystaan.
Mar xillligaas in yar ka horreysay ayay ahayd markii iigu horreysay ee caana geel oo aniga oo arkaya la lisay oo kulul aan halkaa ku cabbo mar aan degaankaas u soo raacay saaxiibbo iyo walaalo. Waxay ahayd markii iigu horreysay ee caano geel oo sidaa u cusub aan cabbo. Waxaan arkay in ay aad uga dhadhan wanaagsan yihiin dhaayda geela ee aan makhaayadaha ka cabi jiray ama xataa guriga marka suuqa laga soo iibiyo ka dib kuwaas oo aan dhibsan jiray cabiddooda.
Waan ka gudubnay oo dhowr tallaabo meel ka sokeysa buundada saaran togga Buur Hakaba ka sokeeya ayaa waxaa nagu joojiyay ciidammo meesha deggan. Waxay baaraan baabuurta u tallaabeya Buur Hakaba iyo kuwa ka soo baxaya ama ka soo gudbaya.
Qaddar kooban markii su’aalo uu na weydiiyay aan uga jawaabnay ayuu askari goobta taagnaa noo fasaxay in aan socodkeenna sii wadanno.
Waxaan wadannaa gaari kiro ah oo aan ka soo qaadannay sharikadda Meryl. Gaarigu waa Land Cruiser. Beatrix oo gaariga wadday waxaa u geli weyday marsha kale oo dhan marka laga reebo midda dib u celisa gaariga.
Si kasta haddii aan yeelnay oo aan isu beddelnay oo la demiyay oo la daaray marnaba gaarigu waa diiday marsha hore. Waxay kalliftay in gaariga ay gadaal u dhaqaajiso oo isaga oo gadaal u socda ay kala fireyso oo aan Buur Hakaba ku galno annaga oo fuushan baabuur gadaal-gadaal u socda oo magaalada oo dhami ay na soo eegeyso.
Ma ahayn sida ugu qurxoon ee lagu tago magaalo aad howl ugu socoto, laakiin waxay ahayd sida markaas ay dantu nagu kalliftay.
Anigu isla markiiba waxaan ku soo dhacay bas meesha taagnaa oo Xamar u soo socda. Markii aan Xamar imidna Taksi ayaan qaatay oo waxaan tegey xafiiska hey’adda oo ku yaallay meel aan ka fogeyn Sayidka oo ku beegan Wasaaradda Dalxiiska dhabarkeeda. Madaxa hey’adda ayaan uga warramay xaaladda.
Waxaan halkaas ka soo kaxeystay Land Cruiser kale. Xarig ka sameysay fiilooyin bir ah oo gaariga kale aan ku soo jiidno ayaan hore u soo qaatay. Inta aan qorraxdu dhicin ayaan Buur Hakaba ugu imid labadii gandhood oo Hotel degay anna qol ii qabtay. Halkaas ayaan ku hoyannay.
Habeenkaas waxaan Buur Hakaba isku aragnay Macallin ka mid ah Macallimiinteydii Dugsiga Hoose ee Buulo Burte, Gary Cooper, oo weli Wasaaradda Waxbarashada ka tirsan. Waxaan ka xumahay in aanan Macallinkeyga aqoon magaciisa rasmiga ah. Inkasta oo magacaan loo yiqiin waa Macallin Soomaali ah.
Waxaa kale oo aan wakhti isla qaadannay saaxiib aan isku horin ahayn Ururka Shanaad, waardiye ama santari aan habeenno dhowr ah wada qabannay markii aan ku jiray Dugsiga Tababbarka Xalane. Isaguna macallin ayuu markaan ka yahay Buur Hakaba isaga oo soo dhammaystay Kulliyadda Waxbarashada ee Lafoole.
Buur Hakaba waa buur aad u weyn, laakiin ka duwan buurihii aan ku soo arkay Hiiraan, Bari, Shiikh iyo Borama. Buur dhagxaan ah ma aha ee waa hal dhagax oo aad u weyn oo is-haysta oo keligiis buur ah.
Degaanka intiisa kale waa dhul siman oo beeraleey ah.
Waagu markii uu baryay ayaan labadii baabuur isku soo daba xirnay waxaanna ku soo laabannay Muqdisho xilliga qadada.
Gaari kale ayaan isla markiiba diyaarsannay, waxaanna ku ballannay in aan berri subax mar kale u baxno safarkeenna Luuq ee naga dhicisoobay.